Akụkọ - Team Design
Ndị otu ndị ọkachamara na-emepụta ihe, nwere ahụmahụ na nhazi nke akwa ọnụ ụzọ maka ihe karịrị afọ 10. Ọ dị mma na ụdị dị iche iche, site na imewe, ihe onwunwe, multi-functional na okike imewe, mmepụta usoro, jikọtara àgwà na bara uru, iji mepụta ụdị dị iche iche, nwekwara ahaziri ahazi dị.
Anyị na-amụbawanye anyị imewe otu na ugbu a nwere ọkachamara imewe otu raara onwe ya nye na-emepe emepe ọhụrụ ute na doormat aghụghọ na-egbo mkpa nke dị iche iche ahịa.We nwere dị iche iche ọhụrụ ngwaahịa maka ndị ahịa na-ahọrọ ọ bụla quarter.And anyị e ịgbasa anyị mmepụta ngwá ọrụ. na ikike, anyị agbakwunyere ọtụtụ nnukwu ígwè ọrụ iji zute ngwaahịa dị iche iche. Anyị nwere ike ịmepụta atụmatụ nke anyị kapeeti, pụrụ iche, akwụkwọ akụkọ, nke ndị ahịa anyị hụrụ n'anya. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị tinyere ego na nnukwu ígwè obibi akwụkwọ, anyị nwere ike ịmepụta ha. ụkpụrụ nke onwe, mbipụta nke anyị, mmepụta nke anyị, otu nkwụsị iji gboo mkpa ndị ahịa chọrọ.Strong imewe otu, nwere ọtụtụ nke onwe ha patent registration.As long as you have idea, anyị nwere ike ime ka ngwaahịa izute gị chọrọ.Give gị echiche ndị na-emepụta anyị ka ịmepụta onwe gị. Ọ bụrụhaala na ị na-enye anyị sketch ma ọ bụ echiche, onye mmepụta anyị ga-ese foto 3D maka nkwenye, nke mere na ị nwere ike ịghọta nke ọma ma ngwaahịa ahụ bara uru imeghe ebu, ma ọ bụ y. ị nwere ike ịchọta nkọwa ndị na-efu efu nke ngwaahịa ahụ, ka ị gbanwee ọzọ, na n'ikpeazụ chepụta ngwaahịa nke afọ ojuju.
Kwa afọ, anyị na-emepụta na-aga dị iche iche ngosi na-eme ka ha ngwaahịa imewe, ma na-ezo aka ngosi nke ngwaahịa ndị ọzọ na-ahụ n'ike mmụọ nsọ na ike jikọtara na anyị ngwaahịa.Kwa afọ ọhụrụ anyị ụdị ga-ike afirmed site ahịa, na ndị ọgbọ ka ṅomie, anyị e-eṅomi, ọ dịghị mgbe gafere. Anyị adịghịkwa atụ egwu na-eṅomi, n'ihi na anyị ga-enwe mma aghụghọ oge ọzọ.